F0NT | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
Myanmar Unicode fonts (Myanmar3, Parabike etc.,). Download Here CLICK HERE
Converter for All Fonts CLICK HERE
Zawgyi <=> Unicode Converter CLICK HERE
Unicode Fonts => Zawgyi Reading Converter CLICK HERE
Unicode Fonts CLICK HERE
Ayar Fonts CLICK HERE
3 comments on “F0NT”
hudfra on December 3, 2010 at 2:00 pm said:
Some stupid is still endeavoring to cheat others that ayar font is Unicode .
it is whay zeet font like you.
ဖိုးလမင်း on May 4, 2011 at 2:25 am said:
အကို ရေ။ ကျနော် အကို့ဆိုက်ကိုအမှတ်မထင်လမ်းကြုံလို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ wordpress.com ကနေကျနော် free အကောင့်လေးတစ်ခုနဲ့ လုပ်ထားပါတယ် ။ကျနော့်ရဲ့ အကောင့်ကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုတွေလုပ်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျနော် မလုပ်တတ်သေးလို့ အကို အချိန့်ရမယ်ဆို၇င် ကျနော့်ကိုစာပြန်ပေးပါခင်ဗျာ။ phoelamin@apytz.net ကကျနော့်အီးမေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
chitoo on December 24, 2011 at 12:50 am said:
font တွေများလွန်းလို့ ဘယ်font ကိုသေချာသုံးရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။
မနေ့က မြန်မာ၃ တင်ထားတယ်ပြီးတော့ ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ် ကွန်ဝတ်တာ ထည့်ထားတာ. ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆိုက်ဘားမှာ စားလုံးတွေ အကွဲအပြဲနဲ့ပေါ်နေတယ်။ ယူနီကုန် မြန်မာ၃ တစ်ခုထဲသုံးလ်ို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါသလား။